Feerkii qarniga Mohamed Ali v George Foreman + The World. Dhacdo qiiro leh misna aad la ilmeyn doonto. – Filimside.net
Feerkii qarniga Mohamed Ali v George Foreman + The World. Dhacdo qiiro leh misna aad la ilmeyn doonto.
January 12, 2019 Cabdiraxmaan Anteeno
George Foreman wuxuu ahaa feeryahan xoog badan wuxuuna heystay suunkii dahabka ahaa ee feerka miisaanka culus asigoo ahaa waqtigaas qof laga dambeeyay 32 cayaarood uu cayaarayna wuxuu wada gaaray dhamaantooda guulo waaweyn, wuxuuna dhulka soo dhigay ragii ugu caansanaa buujimada aduunka oo ay kamid yihiin Joe Frazier iyo Ken Norton.
Wuxuu ahaa mid xoog weynidiisa laga wada yaabay feerkiisana lala dhici jiray asigoo daafaha caalamka oo dhan magac iyo maamuus ku yeeshay, waxaa intaas usii dheeraa raga riingaha la kora iney ka cabsan jireen in feerkiisa u dhintaan xoogiisa awogeed.
Maxamed Ali markaas wuxuu ahaa mid da’ sii noqonanay halka George Foreman uu ku jiray waqtigiisii ugu fiicnaa wuxuuna lahaa xoog miiran aanan waligiis laga guuleysan.
Sanadku waa 1974tii Maxamed Ali wuxuu doonayaa inuu maqaamkiisa soo ceshto oo suunkii laga xayuubiyay dib ugu guuleysto.
Waxay aheyd sanadkii 1967 markii USA ay suunka dahabka ahaa ka xayuubisay halyey Maxamed Ali kadib markuu diiday inuu ka qeyb galo dagaalkii umulo dooxa ahaa ee Vietnam War asigoo tibaaxay inuu yahay muslim isla markaasna aysan u banaaneyn inuu ka qeyb galo dagaal aan dar Alle aheyn.
Taasi waxay aheyd sababtii Maxamed Ali suunka looga xayuubiyay oo xitaa loo xiray.
Hase yeeshee Ali wuxuu soo laabtay 1970kii si uu taariikhdii feerkiisa horey usii wato waxaana waqtigaas aduunka ku amar taagleynayay George Foreman oo xoog weynidiisa lagay yaabay.
Arinta xiisaha leh ayaa waxay aheyd in dhamaan dadkii kulankaas saadaalinayay ay guusha u saadaaliyeen George Foreman mana jirin qof guusha u saadaaliyay Mohamed Ali.
Waxay dadka dhan is lahaayeen Mohamed Ali si fudud ayaa lagu maraa waliba xitaa la isma laheyn wareega afaraad ayuu gaaraa iskaba daayee in uu dhameysto 15ka wareeg ee cayaarta ka koobantahay.
Goerge Foreman mar uu saxaafada la hadlaayay wuxuu dhahay “Ali wuxuu noqon doonaa mid nasiib leh hadii aanan noqon Malaga dhimashadiisa isla markaasna aanan sidii sheydaan u garaacin”
George isla weynidiisa waxay gaartay mar laweydiiyay “masii wadaneysaa feerka aduunka hadaad guuldareysato?” wuxuu ku jawaabay “Excuseme” markaas ayuu wariyihii dhahay oo guuldaro xitaa kuma fikireysid miyaa? Wuxuu ku jawaabay “maya” asigoo shegay waxaan guul aheyn inuusan garoonka u galeynin.
Mid kamid ah khabiiradii waagaas falanqeyn jiray cayaaraha feerka miisaanka culus ayaa yiri “waxaa la gaaray waqtigii aan Mohamed Ali dhihi laheyn bye byee waayo xaqiiq ahaan awood uma lahan inuu jibiyo Foreman”
Ali oo u jawaabayay khabiiradaas ayaa yiri “ waxaad dadka u sheegteen inaan wax fursad ah u heysan jabinta Goerge Foreman lkn I dhageysta; waxa kaliya ee aan u baahanahay waa duco, oo hadii ducadaas Alle iga aqbalo George Foreman iska daayee xitaa buuraha ayaan burburin karaa”
Markale Ali wuxuu dhahay asna “hadii ay shoog iyo filan waa idinku noqotay iscasilaadii Nixon waxyar suga inta aan ka garaacayo George Foreman.
Markale wuxuu Mohamed Ali dhahay “Riingaha waa diyaar hada, markii aan jabiyo George Foreman waxaan ka doonayaa dadka oo dhan markaas iney ii qiraan inaan ahay feeryahankii ugu weynaa abid aduunkaan soo maray, waxaad ii sheegteen awooda Foreman iyo heerka ay la egtahay lkn hada ayaan arkeynaa”
George Foreman asna wuxuu yiri “ninkaan tan iyo markuu riingaha bilaabay wuxuu bilaabay inuu dal dalmo kadib markii uu koox xantoobo ciid ah garaacay wxaanse idiin sheega inaan daldalankaas looga joojin Karin waxaan garaacis aheyn”
Ugu dambeyn waxaa la gaaray maalintii lagu balamay daafaha aduunka oo dhan ayaa si toos ah looga daawanayay waxaana lawada sugayay dhamaan dadkii inta wareeg ay ku qaadan doonto George Foreman inuu dhulka dhigo Mohamed Ali.
Ali asna wuxuu dhankiisa wacad ku maray inuu fariisan doono asigoo ah Chambionka aduunka isla markaasna caalamka tusi doono wuxuu yahay.
Gambaleelkii ayaa yeeray feerkii ayaana bilowday iyadoo George Foreman uu bilaabay inuu feer la dhaco Mohamed Ali oo difaac ku jiray inta badan cayaarta.
Mohamed Ali ayaa oo mudo riingaha kuso jiray ayaa dagay kaarto cajiib ah oo uu doonayo inuu kaga adkaado ninkaan xooga weyn wuxuuna sameeyay riingaha oo dhan ayuu u faarujiyay asigoo dhanka xargaha riingaha ku xiran aaday taasoo jaanis siisay Foreman inuu siduu doono u weeraro Ali.
Wareegii koowaad labaad sadaxaad ilaa laga gaaray wareegii sideedaad Mohamed Ali wax weerar ah ma uusan qaadin wuxuuna ku jiray difaac adag asigoo ugu dan lahaa in Foreman siduu doono u feero markuu daalo oo tamarta ka baxdo halmar gaadmo ku qabto.
Markii la gaaray wareegii 8aad ayuu Ali adeegsaday Mind Game cayaar maskaxeed cajiib ah asigoo ku qeyliyay Foreman isla markaasna ku dhahay “sidii gabdhaha ayaad wax u garaaceysaa, awoodii aad ku booteyneysay intaaa miyaa tabar malihid” iyo hadalo lamid ah.
Khabiirada cayaaraha feerka miisaanka culus waxay ku tilmaameen kaartada uu dagay Ali iyo cayaartii Mind Game-ka aheyd in waxbadan ka saaciday inuu guuleysto waayo Foreman oo isku arkay ninka aduunka ugu xooga badan isla markaasna 8 wareeg garaacayay Ali markii hadalkaas lagu dhahay wuxuu dareemay niyad jab aad u weyn.
Ali ayaa ka faa’idstay niyad jabkii soo wajahay Foreman asigoo bahal feer ah u kala taagsaday isla markaasna KO dhulka la dhigay.
Caalamkii oo dhamaa ayaa afka gacanta saaray Mohamed Ali oo ku guuleystay feerka aduunka ee meesaanka culu isla markaasna suunkii dahabka ahaa kala wareegay George Foreman.
Mohamed Ali oo cayaarta kadib aduunka la hadlay ayaa yiri “cadaadis kasta oo aduunka I saaray waxaan u badalay habeen aad u fudud, sababta ma taqaaniin? Waayo awooda Alle ayaa waxkasta ka weyn, hadii aad awooda Alle rumeysantahayna xitaa George Foreman agtaada wuxuu ka noqonayaa caano nuug”.
Waxaa la sheegaa in Ali awooday inuu dilo oo nafta dhaafsiiyo Foreman lkn ma uusan sameynin waxayna sidaas ku dhacday; markii uu feerka socday oo Ali feerka ku dhuftay Foreman uu sii dhacay Mohamed Ali wuxuu awooday in George Foreman feer kale ku dhufto oo sixun dhulka u dhigo.
George Foreman oo cayaarta kadib hadlay ayaa yiri “ Ali waa nin naxariis leh waligeyna abaal ayaan u heyn doonaa waana taageeri doonaa intaan noolahay waayo wuu awooday inuu dilo anoo xaalad aan fiicneyn ku jiro oo feer labaad igu dhufto lkn sidaas ma uusan sameynin abaalkiisa waligey ma iloobi doono”
Markalana wuxuu Foreman yiri “Ali wuu iga guuleystay waayo waa feeryahankii ugu fiicnaa taariikhda soo maray iyo qofkii ugu quruxda badnaa ee isheyda aragto”
Sidaas ayuu ku aamusiyay Mohamed Ali dadkii rabay iney liidaan guuldarana ku sagootiyaan.
Mohamed Alli ayaa loo doortay sanadkii 2,000 Sportsmankii qarniga asigoo garaacay rag ay kamid ahaayeen Pelle iyo Maradona.
Alle ha u naxariisto Mohamed Ali wuxuu ahaa nin iimaan leh awooda Allana aaminsanaa taasoo u sahashay inuu Cizzi iyo Sharaf aduunkaan ugu noolaado.
sawirada cayaartaas hoos ka daawo.
Cabdiraxmaan Xasan Anteen.
Waxaa Aqrisay 513